Featured – Agromart
« Home / Featured
Pecan Nut (पेकान नट )
Marich Plant(मरिच )
Price : Small - 1000 , Big - 1500
परिचय : पिका नट्स ओखर जस्तै देखिने तर रुख र फल दुबै ओखरको भन्दा सानो हुने एक बिरुवा हो । यसको फल पनि करिब ओखर जस्तै हुन्छ तर यो हातले नै फुटाएर खान सकिन्छ , यसको बाहिरि भाग अत्यन्तै नरम हुन्छ । यसको फल अत्यन्तै मिठो हुनुको साथसाथै धेरै प्रकारका भिटामिनहरु पाईन्छ । यसले मानिसको स्मरण शक्ति बढाउनमा मद्दत पुर्याउछ । यस बिरुवाको आयु सरदर १०० बर्ष हुन्छ । यसको एक बयस्क रुखले ४०-५० केजि सम्म फल् दिन्छ खेती प्रबिधी : नेपाल मा पिका नट्सको खेती समुन्द्री सतहबाट ८०० मिटर देखी ३००० मिटर सम्म गर्न सकिन्छ । यसलाई अलिकति ओसिलो ठाउमा लगाउदा राम्रो हुन्छ । यो बिरुवालाई ५-५ मिटरको फरकमा लगाउनु पर्छ । यो बिरुवा १ रोपनिमा करिब २० ओटा लगाउन सकिन्छ । यस बिरुवाले ४-५ बर्ष बाट उत्पादन दिन सुरु गर्दछ । लगाउने विधि : -२ फीट को खाडल खनेर मल र माटोको मिश्रण राख्ने ।त्यसपछि नया पालुवा आउन अधिको विरुवालाइ रोप्ने । -हिउदको समयमा पानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हिउदमा पनि राम्रो संग यसलाइ लगाउन सकिन्छ । -स्याहार सुसार राम्रो संग गरेर एक पटक हुर्काएको विरुवालाई हुर्किसकेपछि त्यति धेरै हेरचाह गर्नु नपर्ने । बजार : बिश्व बजारमा पिका नट्सको माग राम्रो छ । नेपाली बजारमा पिका नट्स प्रती किलो २०००-२५०० सम्ममा बिक्री हुन्छ । पिका नट्स चाडै नबिग्रने हुँदा यसलाई लामो समयसम्म पनि भन्डारण गरेर राख्न सकिन्छ । यो बिरुवा १०० बर्षसम्म बाचिरहने हुँदा पछील्लो पुस्ता सम्मको लागी पनि आम्दानिको राम्रो स्रोत बन्छ । पिका नट्स बिरुवाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् : याग्रो मार्ट प्रा. लि. (Agromart Pvt.Ltd.) काठमाडौं : चप्पल कारखाना चोक , महाराजगन्ज 01-4418921,9866072127(Viber/WhatsApp/Imo),9808511981
उचाइःकरिब २ फिट